पारिवारिक तथ्यांक संकलनतिर तमु समाज | We Nepali
पारिवारिक तथ्यांक संकलनतिर तमु समाज
२०७१ चैत १७ गते १४:०३
लन्डन । तमु समाज यूकेले आफ्ना सदस्यहरुको पारिवारिक तथ्यांक संकलन गर्ने भएको छ । समाजको हालै सम्पन्न चौंथो कार्यसमितिको दोश्रो बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
सदस्य संख्या वृद्धि भइरहंदा समाजले सदस्यता प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन उक्त निर्णय गरेको समाजका संस्थापक अध्यक्ष चित्रबहादुर गुरुङले वीनेपालीलाई जनाए । तथ्यांक संकलनका लागि हङस्लो क्षेत्रमा सदस्यता संयोजक भीमबहादुर गुरुङ, नर्थहोल्ट, हेज र साउथ ह्यारो क्षेत्रमा सल्लाहकार रामचन्द्र गुरुङ र गंगाबहादुर गुरुङ, वेम्ली, सडबरी, अल्पर्टन र ग्रीनफोर्ड क्षेत्रमा सल्लाहकार एवं निवर्तमान अध्यक्ष शिवशरण गुरुङ तथा कोअर्डिनेटर केदारबहादुर गुरुङलाई जिम्मा दिइएको छ । त्यसैगरि, ह्यारो र ह्यारो विल्ड्स्टनका लागि महासचिव ज्ञानबहादुर गुरुङलाई तोकिएको छ । बन्र्टओक इलाकामा उपाध्यक्ष शिवचन्द्र गुरुङ, कोषाध्यक्ष उदय गुरुङ र आमा समूहकी अध्यक्ष माया गुरुङलाई तोकिएको समाजले जनाएको छ ।
लन्डन बाहिर तथ्यांक संकलनका लागि संस्थापक अध्यक्ष चित्रबहादुर गुरुङ र उपाध्यक्ष बिजु गुरुङले जिम्मेवारी लिएका छन् ।
समाजका अध्यक्ष अर्जुनबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा सञ्चालित बैठकमा निवर्तमान कोषाध्यक्ष केदारबहादुर गुरुङले वर्तमान कोषाध्यक्ष उदयबहादुर गुरुङलाई सम्पूर्ण हरहिसाव हस्तान्तरण गरे । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विज्ञान प्रसाईं मार्फत ३१ मार्चसम्मको आयव्यय ‘अडिट’ पछि कोषको सम्पूर्ण विवरण हस्तान्तरण गरिएको हो ।
बैठकले आफ्ना नयां पुराना सदस्यहरुबीच भेटघाट तथा परिचय आदानप्रदानका लागि छिट्टै ‘मेम्बरसीप डिनर’ गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, समाजले आफ्ना जेष्ठ सदस्यहरुका लागि एकदिने समर टुर समेत गराउने भएको छ । यस कार्यका लागि सल्लाहकार खड्काबहादुर गुरुङलाई जिम्मा दिइएको छ । तर, टुर कहिले र कहां गर्ने भन्नेबारे पछि निर्णय गरिनेछ ।
बैठकले आमा समूहको सक्रियतामा आफ्नो वार्षिक नियमित कार्यक्रम वैशाख पूर्णिमा तथा वुद्ध जयन्ती आगामी आइतबार ३ मेमा साउथ ह्यारो बरो फुटबल क्लव हलमा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । मध्यान्ह १२ देखि राती ८ बजेसम्म हुने यस कार्यक्रममा निशुल्क प्रवेश तथा खानपिन प्रवन्ध मिलाइएको छ ।
उता, समाजले एजुकेशन सेक्रेटरी खुमबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा नेपाली तथा तमु भाषा कक्षा समेत सञ्चालन गर्ने भएको छ । समाजले नेपाली भाषा पढाउन भोलेन्टियर समेत आवश्यक परेकाले इच्छुकलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।
बैठकले लमजुङ हिले टक्सार स्थायी निवासी मनबहादुर गुरुङ अस्वस्थ्य भई उपचार गराइरहेकाले उनको उपचार सहयोगार्थ चन्दा संकलन अभियान समेत थाल्ने निर्णय गरेको छ । यस कार्यका लागि संस्थापक अध्यक्ष चित्रबहादुर गुरुङलाई संयोजक तोकिएको छ ।
उक्त बैठकमा कार्यसमिति सदस्यहरु, सल्लाहकारहरु, अतिथी डा. चन्द्रबहादुर गुरुङ, पोखरा उपमहानगरपालिकाका भूपू उपमेयर क्या. मनबहादुर गुरुङ लगायत सहभागी थिए । बैठकमा इन्टरनेशनल विजनेश स्कुलका प्रकाश गौतमले हल तथा जलपान प्रवन्ध गरेका थिए ।